Vaovao - Mitsitsia vola ary manahy! Ahoana ny fomba handaminana ny kitapo kosmetika Capsule mety indrindra?
Inona no atao hoe "kitapo kosmetika kapsula"?
Izy io dia mitovy amin'ilay "wardule kapsule" antsoin'ny tsirairay matetika. Na dia tsy dia be loatra aza ireo entana ao anatin'ity sakaosy kosmetika ity dia misy ny "entana fototra" ilaina amin'ny makiazy isan'andro.
Ary ny vokatra eto dia vokatra be dia be sy azo ampiharina avokoa, ny fampifangaroana ny loko tsy dia tafahoatra loatra, na manao ahoana na manao ahoana ny fampitahana azy, tsy mora ny "manitsaka kotroka".
"Kitapo kosmetika kapsula" mandeha tsara dia tsy vitan'ny fanesorana ny fizotran'ny fisafidianana vokatra mandritra ny makiazy, hanatsara be ny fahombiazan'ny makiazy, fa hahatonga ny fisainantsika alohan'ny haingon-tarehy.
Mazava ho azy, hitahiry vola ianao raha tsy mifidy vokatra misy doka na asa tsy ilaina!
Kitapo kosmetika iray feno dia ahitana fototra, pensilihazo amin'ny volomaso, eyeliner, aloky ny maso, mascara, lokomena, loko mena ary contouring, tafiditra ao ireo sokajy vokatra 8 ireo.
Noho izany dia manolotra vokatra vitsivitsy mora ampiasaina isaky ny sokajy vokatra aho. Mila misafidy izay mety aminao amin'ny sokajy rehetra ianao.
Teny lakile: vokarin'ny makiazy voajanahary, mazava ary maneho hevitra feno
Fomba fisafidianana: mora simba kokoa ny vokatra makiazy fototra amin'ity faritra ity, ary tsy mila teknikan'ny makiazy manokana ianao. Mila mifidy fotsiny ianao arakaraka ny karazany amin'ny hoditra.
ps. Raha tsy misy vokatra mety aminao, dia azonao atao koa ny mitady vokatra misy marika hafa mifototra amin'ny "teny lakile".
Teny lakile: Ny hery miafina sy ny fiarahan'ny hamandoana, mety amin'ny hoditra misy pentina
Raha ny marina, raha te-hamorona vokatra makiazy madio sy tsy misy tomika ianao amin'ny hoditra tsy tanteraka, dia tsy voatery mila dingana manelingelina manokana ianao-ny fisafidianana fototrano misy rano miaraka amin'ny hery miafina mahery sy ny fanitarana dia fomba mahomby indrindra.
Rehefa avy nanaparitaka ity fotaka ranon-javatra ity dia nisy vokany "hoditra feno menaka" voajanahary. Na dia nilaza aza ny tompon'andraikitra fa maina kokoa sy mifangaro amin'ny hoditra maina izy io, tsy mora ny manala makiazy aorian'ny fametrahana ny hoditra misy menaka.
Ho an'ny feo tsy mitovy amin'ny hoditra amin'ny ankapobeny, boribory maizina, marika mony ary kilema madinidinika hafa, ity fotona ity dia afaka manarona mora foana.
Ny lokon'ity pensilihazo volomaso ity dia somary volondavenona ihany, ary ny refill dia manify mba hahasarika mora foana ny "volomaso masiaka" voajanahary sy mazava.
Raha ampitahaina amin'ny pensilihazo volomaso volomaso misy azy ireo taloha, ity kinova vaovao amin'ny "Machete Eyebrow Pencil" ity dia ho malefaka kokoa amin'ny asany.
Ankoatr'izay, ny famenoana ity pensilihazo volomaso ity dia antonony amin'ny hamafiny, izay mety indrindra amin'ny fampiasana ny tendron'ny penina mba hisaritana vokatra "miorim-paka". Xiaobai dia tsy hanana tsindry hampiasaina!
Volomaso aloha & mascara
Teny lakile: madio, mazava
Fomba fisafidianana: ny primer izay tia makiazy mitanjaka dia efa ampy; raha mila volomaso lava sy misimisy kokoa ianao dia azonao atao ny mampiasa azy roa; ireo mpamatsy vola izay tsy tia manala mascara tsy tantera-drano dia misafidy mascara mivantana.
Ny feta ao anatiny dia misy kofehy maro izay afaka manalava volomaso. Na ny mainty mainty indrindra aza, ny loko dia manana refy volondavenona, ary ny vokatry ny hosodoko dia toy ny "volo volomaso" voajanahary.
Raha ampitahaina amin'ny mascara mahazatra, voajanahary kokoa ny vokatr'ity vokatra ity, ary tsy mora ny torana amin'ny fanarahana azy. Soso-kevitra indrindra ho an'ireo matoatoa kely mora "tanana" rehefa miborosy volomaso!
Teny lakile: refill tsara, tsipika malama
Fomba fisafidianana: maranitra sy marefo kokoa ny tsipika nosoratan'ny penina eyeliner ranoka, ary ny penina eyeliner gel dia mety kokoa ho an'ireo rahavavy tia makiazy maivana.
Na dia heverina ho mora aza ny vidiny eo amin'ireo vokatra mora vidy, dia ampitahaina amin'ny vokatra lafo vidy amin'ny resaka fandokoana loko, ny fahadiovan'ny rano ary ny fahamendrehan'ny nib.
Samy mainty sy volontany no alokaloka mety amin'ny makiazy isan'andro. Ary somary maivana ny lokon'ny volon'ity iray ity, ka na ny "fety sembana" dia afaka mifehy azy mora foana ~
Teny lakile: lokon'ny tany, fandokoana antonony
Fomba fisafidianana: Ankoatry ny fandokoana ny eyeshadow, ny palette misy loko marobe dia azo ampiasaina amin'ny fanaovana contouring. Ireto palette miloko 35 manaraka ireto dia manana loko maro karazana ary mora vidy kokoa.
Raha tsy mamela afa-tsy andiana eyeshadows eo amin'ny latabatra fiakanjo aho, dia ny safidiko tokoa no ho fotony indrindra ary miaraka amin'izay ny "loko an-tany" marobe.
Ity "boky kely volontsôkôlà" ity dia tsy misy volontsôkôlà matte vitsivitsy fotsiny izay afaka manasongadina ny fahatsapana ny drafitra, fa manana loko fotsy sy fotsy fotsy ho an'ny famirapiratana koa.
Ny fahazavana sy ny voky ny loko fanetezana etsy ambany dia eo amin'ny toerana afovoany, ary izy io koa dia manokana rehefa ampiasaina ho menatra ~
Ary mirakitra volontany volamena mamirapiratra miaraka amina firafitra "perla mipoaka", izay toa marani-tsaina tokoa rehefa avy noravahana ny maso, ary azonao atao ny mandoko makiazy tsara tarehy miaraka amin'ny sosona mazava sy teboka mamirapiratra.
Lokomena sy lokon'ny molotra
Teny lakile: loko marobe, maro loko ary mora kosehina
Fomba fisafidianana: somary mando ilay lokomena malefaka, ary ny matoatoa izay tia zavona malefaka dia afaka misafidy fotaka molotra.
Tsy mitombina ny hoe ity lokomena ity dia mety ho elaela satria io voa io dia tena voajanahary sy toetra ~
Raha vao jerena dia mafana sy miboridana ny lokony, saingy aorian'ny fametrahana azy eo am-bava, dia tsy ho sarotra loatra ny hifehezana toy ny "loko tany fihinana" mahazatra. Mifanohitra amin'izany no izy, afaka manatsara ny fahatsapana ra amin'ny molotra izy io.
Ny crème crème dia manana fahefana manarona ao ambadiky ny vava, ary tsy mila primer fanampiny ho an'ny fonon'ny molotra lalina ~
Ny mampiavaka azy dia ny malama dia malama, izay tsy mitazona ny matte sy ny frosted malefaka sy manjavozavo vokarin'ny makiazy amin'ny molotra tenany ihany, fa misoroka ihany koa ny fahatsapana maina nateraky ny fahamainana.
Teny lakile: famolavolana loko antonony, tsy fahafaham-po be loatra
Ity blush ity dia manana gloss marefo ary marobe ary tsy mifidy. Io no loko vaovao amin'ny lokon'ny monochromatic. Ny lokon'ny paiso mavokely dia toa mamy sy rivo-piainana, ary mitovy ihany koa amin'ny makiazy amin'ny lokon'ny tany amin'ny ankapobeny. Lalao tena tsara.
Ho fanampin'ity loko miloko tokana ity dia maro amin'ireo loko lehibe manana anarana tokana no tena ampirisihina mafy koa.
Teny lakile: loko maivana, ao anatin'izany ny tonony samihafa
Na dia tsotra aza ny dingana amin'ny fanetezana sy fanasongadinana, ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampiasana sy ny tsy ampiasaina dia tena ratsy kokoa!
Tena mety ny mampiasa an'ity kapila "gloss avo lenta" ity, ary esoriny mivantana ny dingana "fanangonana kapila" amin'ny loko tokana.
Fa ny loko ankapobeny amin'ity takelaka ity dia maivana ihany, ary ny fahasamihafana eo amin'ny hazavana sy ny maizina dia tsy dia matanjaka. Raha manana loko mainty kokoa ianao, dia azonao atao koa ny mitady takelaka hafa araky ny hevitr'ity vokatra ity.
kapoka mink, eyeliner, Mpivarotra volomaso, Fanitarana volomaso, lipgloss, Volomaso maso,